Wiil Dhulka Gaalada Wax Kusoo Bartay Oo Markuu Wadankii Kusoo Noqday Diiday Inuu Salaad Tukado Ilaa 3dan Suaalood Looga Jawaabo! - Wargane News
Home Entertainment & Lifestyle Wiil Dhulka Gaalada Wax Kusoo Bartay Oo Markuu Wadankii Kusoo Noqday Diiday...
Wiil muslima oo dhalinyaro ahaa ayaa waxa uu aaday mid kamid ah jaamacadaha wadamada gaalada, gaar ahaan kuwa hantiwadaaga ee aaminsan in ay aduunyadu iska timid oo aanay cidi abuurin, kadib markii uu in muddo ah soo joogay ayaa uu kusoo noqday wadankiisii, markaasaa ay reerkoodii si qurux badan usoo dhaweeyeen iyagoo ku farxay aragtidiisa iyo cilmiga uu lasoo laabtay.
Sidii madasha soo dhawayntiisa loo fadhiyay ee loo faraxsanaa ayaa ay gaadhay waqtigii salaada loo kici lahaa, aabihii iyo walaalladii ayaa kacay oo u diyaar garoobay salaadii, isaguna waa uu sii fadhiyay, kadib markii uu sii baxayay aabihii ayaa waxa uu ku yidhi aabo ina keen aynu salaada soo tukanee, balse jawaabtu waxa ay kaga yaabisay aabihii oo dhabannada is qabtay amakaag awgii.
Waxa uu wiilkani ku jawaabay: Aabo ku raaci maayo mana tukanayo illaa aydun iigu yeedhan sheekha sheekhyada ugu wayn ee iiga jawaabi kara sadexdan su’aalood.
Reerkii ayaa markay arkeen wiilkoodu halkuu marayo iyo inaanu wax kale ka yeelaynin ay dooneen sheekh kamid ahaa culimada magaalada ee cilmiga iyo akhlaaqda lagu yaqaanay, markaasuu wiilkii waydiiyay: waa maxay su’aalaha sadexda ah ee aad rabto in lagaaga jawaabo?
Wiilkii waxa uu ku celiyay: oo ma waxaad u malaynaysaa inaad ka jawaabi kartid su’aalahayga oo dad badan oo hore ku guul daraysteen jawaabtooda?
Sheekhii ayaa waxa uu yidhi: Adigu soo daa waxaad haysid waan isku dayi insha Allah.
Wiilkii ayaa waxa uu yidhi: Su’aalahayga sadexda ahi waa:
Ilaahay miyuu jiraa? haday jawaabtaadu tahay haa itus noocuu u eegyahay?
Waa maxay qadarku?
Hadii shaydaanka laga sameeyay naar aba dab, maxaa naarta loogu tuurayaa qiyaamaha hadaanay waxba ka qaadayn?
Judhii uu sidaas u dhameeyay wiilkii suaalihii uu waydiinayay sheekha ayaa uu sheekhu dhirbaaxo indhaha u saabiyay, dhirbaaxadan oo uu wiilkii aad u dareemay xanuunkeeda, dabadeed markaasuu wiilkii intuu cadhooday ku yidhi sheekhii oo sheekhow maxaad igu dhirbaaxday? ma jawaabtii baad garan wayday markaasaad isku dhaafinaysaa?
Sheekhii ayaa ku yidhi: Maya balse dhirbaaxadaan kugu dhuftay waa jawaabta suaalahaad i waydiisay.
Wiilkii waxa uu yidhi: maan fahmin ee ii faahfaahi.
Sheekhii ku celiyay: ma rumaysan tahay inuu xanuunku jiro?
wiilkii ayaa ku jawaabay: dabcan haa oo sawtan hadda dhirbaaxadaadu i xanuujisay.
Sheekhii ayaa ku yidhi: Itus, noocay u eegtahay?
Wiilkii waxa uu ku jawaabay: ma ku tusi karo.
Sheekhii ayaa ku yidhi: Hadaba waa taa jawaabta suaashaadi koowaad, Ilaahay waa uu jiraa, waa aynu dareemi karnaa marka aynu u fiirsano waxyaabuhuu abuuray iyo awooda ka dambaysa abuurkaas, balse ma arki karno intaynu dunida joogno.
Kadib ayaa isagoo sheekhu hadalkii sii wata ku yidhi: miyaad xalay toole ku riyootay inaan wajiga kaa dhirbaaxi doono?
Wiilkii ayaa ku jawaabay: Maya
Sheekha: Hadaa cidi ma kuusii sheegtay inaan maanta ku dhirbaaxi doono?
Sheekha: Hadaba waa kaas qoraalka iyo qadarku.
Kadib iyaa uu sheekhu hadalkiisii sii watay waxaanuu yidhi: Gacantaydan ku dhirbaaxday maxaa laga sameeyay?
Sheekha: Maxaad dareemaysaa markay dhirbaaxadu kugu dhacayso?
Wiilka: Waxaan dareemayaa xanuun.
Sheekha: Hadaba waa sidaas oo kale, inkaste oo shaydaanka laga sameeyay dab hadana waa makhluuq, Allah ayaa ugu talo galay naartu inay xanuujiso waayo isagaa labadaba abuuray.
Intaasi markuu dhameeyay ayuu wiilkii oohin qabsaday isagoo ka muruugaysan salaadihii dhaafay, isla markiibana waxa uu bilaabay inuu Allah dambi dhaaf waydiisto, waxaanu bartii ku tukaday salaadi iuu diidanaa inuu tukado kadib markii madmadawgii uu shaydaanku qalbigiisa ku tuuray laga xaadhay.
Ilaahaw naga dhig kuwii dariiqa toosan aad garansiis..Aamiin
Nagana badbaadi shaydaanka iyo sharkiisa..Aamiin
Naga yeel kuwii ku raaxaysta salaada iyo cibaadada..Aamiin
Fadlan u SHARE garee walaalahaaga kana qayb qaado faafinta khayrka iyo wanaaga, waxa laga yaabaa inu Allah kuugu naxariistee.